Ukuma kwiPlani yeeyure eziyi-3.5 | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 4, 2008 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ndiyayiqonda imicimbi yemozulu kwaye ndiyayixabisa into yokuba iinqwelomoya zinqwenela ukugcina abantu bekhuselekile. Intombi yam eneminyaka eli-14 ubudala ikwohambo lwayo lokuqala kunye neklasi yayo ukuya eWashington DC Ebethumela iifoto kum zeNdlu eNtshonalanga, iSikhumbuzo saseWashington, uMgaqo-siseko kunye nezinye iisayithi okoko wafika ngeCawa ebusuku.
Sihlawule imali encinci ngohambo kwaye isikolo sakhe senze olu hambo ngaphezulu kweminyaka engama-20. Andiqinisekanga ukuba baluphelile uhambo olunje, nangona kunjalo. UKatie kunye nabanye abafundi babambekile kwinqwelomoya kwitreyila kangangeeyure ezintathu ezinesiqingatha. UKatie unditsalele umnxeba wandibuza ukuba angachitha na imali yakhe yokugqibela ngale njikalanga kwizikhumbuzo… Ndamxelela ukuba aqhubeke. Ngoku akakwazi nokuthenga ukutya kwaye ulambile.
Ootitshala bayateketisa, abafundi badikiwe kukulila, kwaye iinqwelomoya azinakundixelela ukuba inqwelo moya iza kuhamba nini. Okwangoku, ayizukuba ngaphambi kobusuku bobusuku xa inqwelomoya ifika apha. Ndizamile ukufowunela iinqwelomoya, ndafumana umyalezo. Ndizamile nokutsalela iindaba zalapha kwaye bebengenandaba.
US Airways, Ndikuthembile ukuba uza kuyikhathalela intombi yam kwaye uyingcatshile loo nto. Andikhathali ukuba uzama ukumgcina ekhuselekile, kodwa ungatshixeli iqela labantwana kwinqwelomoya iiyure eziyi-3.5.
Iinqwelomoya zifuna ukugcina umda, mhlawumbi imizuzu engama-45 ukuya kweyure, ngaphambi kokuba zibuyise abantu esangweni. Ukuba kukho enye inqwelo moya esangweni, yishukumise. Ukuncamathela ngaphezulu koku kuyintlekisa. Ndizama ukungavumeli ukuba lonakalise uhambo lwakhe kodwa ndiziva kakubi ngaye.
tags: mzantsiwebAbaxhasiukubhubha kweentlanganisoUkuthengisa okunovelwanoUMark IngwerIinguqulelo zethebhulethi
Juni 4, 2008 ngo-9: 53 PM
Ndiye ndayeka ukubhabha, nto leyo ethetha into enikiweyo ukuba ndikuthiyile kangakanani ukuqhuba. Kodwa amabali afana nelakho andenza ndithandabuze nangakumbi ukufumana indawo. Njengeengxelo zeendaba ezinje:
Ngokuqinisekileyo kufanele ukuba kubekho indlela ebhetele. Isantya sikaloliwe? Iipakethi zeJet? Abathuthi?
Juni 4, 2008 ngo-10: 10 PM
Ndingathanda ukubona umzila wesantya esiphezulu! Umhlobo wam uthatha uloliwe oya eChicago endaweni yokuqhuba okanye ukubhabha kwaye uyayithanda. Ndijongile kwaye akubonakali ngathi banokufikelela kwi-Intanethi, nangona kunjalo. Mhlawumbi i-Sprint USB inokusebenza.
Ndicinga ngokunyanisekileyo ukuba eyona ngxaki inkulu ngokuhamba ngenqwelomoya ngoku kukuba ifikeleleke kakhulu. Kukho ukhuphiswano oluninzi kangangokuba amaxabiso kufuneka ahlale esezantsi- kwaye ichaphazela yonke into esezantsi. Kungcono ndichithe i- $ 500 okanye nangaphezulu kuhambo olujikelezayo kwaye ndiphathwe kakuhle.
Juni 5, 2008 ngo-7: 40 AM
UKatie wayekhuselekile ekhaya kwaye evakala ezinzulwini zobusuku. 🙂
Juni 5, 2008 ngo-10: 05 AM
Iphupha elibi lokuhamba ngenqwelo moya laliyinxalenye enkulu yobomi bam ngaphezulu kweminyaka engama-20. ubuyise iinkumbulo, ndisebenzisa ukuqhuba ndibuyela eMpuma ndisuka eChicago ukunqanda ukuhamba ngenqwelomoya kodwa ngoku kutshiphu ukubhabha. Ndiyabulela kuThixo ukuba umntwana wakho usindile kodwa ndibetha ukuba kwakunzima kuwe!
Juni 5, 2008 ngo-10: 40 AM
Kwakunzima, kodwa ulungile. Emuva kwentloko yam bendimane ndizixelela ukuba bababambe ngesizathu. Ndinqwenela ukuba bababambe nje kwisiphelo sendlela, nangona kunjalo.
Juni 6, 2008 ngo-4: 38 PM
Ukuhamba ngenqwelomoya?!? Esihogweni, xa sasithabatha uhambo lwethu sisuka eAtlanta, yayiluhambo ngololiwe ubusuku bonke. Intombi yakho ifanele ukuba yiyo mbulelo.
KWAKUFuneka ndihambe ngenyawo ukuya esikolweni iikhilomitha ezili-10 ndingenazihlangu ekhephu. Nyusa. Zombini ezi ndlela! '-)
Juni 6, 2008 ngo-8: 01 PM
Kwaye kwakungaphambi komoya opholileyo, nawo!